Sawirkii ugu horeeyay ee Cali Xarbi iyo Cidda ka danbeysay inuu xagjir noqdo oo la ogaaday (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wiilka Soomaaliga ee dilka u geystay Xildhibaankii Ingiriiska ee David Amess ayaa la sheegay inuu xagjir ku noqday baraha bulshada.
Warbaahinta Ingiriiska aya heshay sawirkii ugu horeeyay ee muuqaalka Cali Xarbi Cali o loo qabtay dilka xildhibaankii ka tirsanaa Baarlamaanka Ingiriiska ee David Amess.
Sida ay qoreen wargeysyada The SUN, Times iyo Daily Mail wiilka 25 sano jirka ah ee Cali Xarbi wuxuu ku saamoobay muxaadarooyinka iyo khudbadana uu jeediyo Wadaadka xagjirka caanka ka ah UK Anjem Choudary oo loo yaqaan wadaadka naceybka oo mar la xiray markii uu taageeray kooxda Daacish.
Muuqaalka Cali Xarbi oo ah kii ugu horeeyay ee laga helo ayaa muujinaya wiil dhalinyaro ah oo dhoola-caddeynaya, waxaana lagu baahiyey dhammaan warbaahinta Ingiriiska, iyadoo hore ay u heleen sawirka aabihii Xarbi Cali Kulane oo wareysiyo kooban ay la yeesheen.
Cali Xarbi ayaa la sheegay inuu ku saamoobay muuqaallo uu Youtube-ka ka daawaday iyo baraha bulshada oo uu leeyahay wadaadka Anjem Choudary, sidaasina ku noqday xagjir. Warkan ayaa laga soo xigtay Cali saaxiibadiis, waxaana weli socda baaritanaka Booliska.
Booliska Ingiriiska ayaa heysta ilaa 22-ka bishan Oktoobar inay maxkamadda hor geeyaan ninkan oo in ka badan 10 jkeer Mindi geliyey xildhibaan Amess oo u dhintay dhaawacii uu gaarsiiyey Jimcihii xilli uu magaalada Essex kula kulmayey dadka soo doorta.
Mid ka mid ah saaxiibadii ayaa u sheegay wargeysja ‘The Sun’ inuu Cali Xarbi aad ula dhacsanaa wadaadka Choudary. Inkastoo uu Cali is-bedelay xilliyadii danbe, haddana qoyskiisa ayaa sheegay in inuu u tababaranayey inuu noqdo dhakhtar, isagoo qaatay afar sano dugsi sare oo caafimaad ah.
Waxaa hore loogu gudbiyey Barnaamijka ka hortagga argagixisada ee Dawladda UK, laakiin baarayaashu wali waxay isku hayaan sidii iyo goortii uu xagjir noqday. Waxaa la rumeysan yahay in loo soo gudbiyey qorshaha muddo shan sano ka hor, markii mid ka mida macallintiisa sheegay inuu yahay leeyahay halis xagjirnimo.
Previous articleMustafe Cagjar oo mar kale loo doortay Madaxweynaha Is-maamulka Somalida Itoobiya
Next articleSiciid Deni oo safar laba toddobaad ah ku qaatay Imaaraadka Carabta iyo xogta laga helay